किनभने गति र सुविधा इटाली मा शीतकालीन ट्रेन यात्रा को लागी महत्वपूर्ण छ, तपाईंले सबै देशको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ शीर्ष गन्तव्यहरू चाँडै र आराम. यहाँ शीर्ष पाँच यो जाडो इटाली रेल द्वारा यात्रा गर्न शहर हो.
भेनिस जाडो सफा अर्थ, कुरकुरा हावा र कम भीडलाई यसको सौन्दर्य तपाईंले अलमल्याउन. एक gondola सवारी वा घूंट कफी मा आनन्द लिनुहोस् वर्ग. तपाईंको भेनिस अनुभव पनि अधिक जादुई बनाउन हल्का snowfall को संभावना सधैं त्यहाँ.
स्टेशन मा व्यक्ति एक टिकटको खरीद सधैं एक विकल्प छ. तथापि, लामो रेखा र असुविधाको लागि तयार हुन, र उच्च मूल्यहरु. यस दिन र उमेर मा, यो आरक्षित आदर्श बन्न तपाईँको रेल सिट अनलाइन. यसलाई अग्रिम कति टाढा आउँछ जब तपाईं आफ्नो टिकट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, जवाफ प्रकार निर्भर हुनेछ इटालियन रेल.
Frecce रेलहरु छन् उच्च गतिको रेल इटाली गरेको प्रमुख शहर बीच कि रन. तिमी सक्छौ प्रारम्भिक रूपमा आफ्नो टिकट किन्न आफ्नो यात्रा मिति अघि चार महिना रूपमा. हालै, Trenitalia यसलाई आफ्नो बुकिंग बादल मडारिरहेको वृद्धि भनेर घोषणा6अगाडि महिना.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-train-travel-italy%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)